မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအခွအေနကေို တဈခှနျးတညျးနဲ့ ထိထိမိမိ ပွောခလြိုကျတဲ့ လူရှငျတျော ငှကျပြောကွျော – CHAR TAKE
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအခွအေနကေို တဈခှနျးတညျးနဲ့ ထိထိမိမိ ပွောခလြိုကျတဲ့ လူရှငျတျော ငှကျပြောကွျော
လူရှငျတျော တဈဦးဖွဈသလို ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ လညျးဖွဈတဲ့ ငှကျပြောကွျော ကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို ရရှိ ထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ ။ လူငယျအရှယျ ကတညျးကနေ အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါမှာ လြှောကျလှမျးခဲ့ပွီးတော့ အခုခြိနျအထိ တိုငျအောငျ သူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျ နဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။
ငှကျပြောကွျောဟာ သရုပျဆောငျတျောသလို ဟာသဉာဏျ လညျးရှငျပွီး သူ့ရဲ့ပွကျလုံးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို တငျဆကျပေးတတျတာ ဖွဈပါတယျ ။ လူရှငျတျောကွီး ဦးငှကျပြောကွျော ကတော့ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီးတှေ တျောတျော မြားမြားမှာ ပါဝငျ သရုပျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လူရှငျတျောကွီး ငှကျပြောကွျော ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိ အခွေ အနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရငျဖှငျ့လိုကျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ နစေ့ဉျနတေို့ငျး မီးတှပေကျြနတောကွောငျ့ ပွညျသူတှေ အားလုံး စိတျဒုက်ခ ရောကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ” လူဖွဈပီး လူလို မနရေတဲ့ တိုငျးပွညျ ….” လို့ ရငျဖှငျ့ လိုကျတာပါ။
ပရိသတျကွီးရေ မီးတှအေမွဲ တမျးပကျြနလေို့ စိတျညဈနပွေီလား??? အခြိနျတိုငျးဖတျရှု့ပေးတဲ့ စာဖတျပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။ crd
Zawgyi … မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ထိထိမိမိ ပြောချလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ငှက်ပျောကြော်
လူရွှင်တော် တစ်ဦးဖြစ်သလို ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် လည်းဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောကြော် ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိ ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။ လူငယ်အရွယ် ကတည်းကနေ အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ပြီးတော့ အခုချိန်အထိ တိုင်အောင် သူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ငှက်ပျောကြော်ဟာ သရုပ်ဆောင်တော်သလို ဟာသဥာဏ် လည်းရွှင်ပြီး သူ့ရဲ့ပြက်လုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို တင်ဆက်ပေးတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးငှက်ပျောကြော် ကတော့ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ တော်တော် များများမှာ ပါဝင် သရုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူရွှင်တော်ကြီး ငှက်ပျောကြော် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေ အနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မီးတွေပျက်နေတာကြောင့် ပြည်သူတွေ အားလုံး စိတ်ဒုက္ခ ရောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” လူဖြစ်ပီး လူလို မ​နေရတဲ့ တိုင်းပြည် ….” လို့ ရင်ဖွင့် လိုက်တာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ မီးတွေအမြဲ တမ်းပျက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား??? အချိန်တိုင်းဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ crd